यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सुत्केरी ! - Onlines Time
November 22, 2020 November 22, 2020 by onlinestime
सन्तान जन्माउने विषयमा पनि विज्ञानले यस्तै आश्चर्यजनक कुरा सफल सावित गरेको छ । अष्ट्रेलियाका एक पुरुषले तीन तीन पटक सुत्केरी भएर बच्चा जन्माएका छन् । बच्चालाई जन्म दिने व्यक्ति ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन्। विश्वको पहिलो गर्भवती यी पुरुषले तीन बच्चा जन्माइसकेका छन् ।
यस लिंग परिवर्तनमा हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको पनि प्रयोग गरिएको छ, जसमा एक महिलाको आवाज पुरुषको जस्तो ठूलो हुन्छ । यो टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको मद्दतबाट प्रजनन तन्त्रमा पनि परिर्वतन गर्न सकिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । बच्चाको जन्म दिने यी व्यक्तिले टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको प्रयोग गरेका थिएनन्। जसको कारण उनको प्रजनन् तन्त्रमा परिर्वतन भएन्। उनले वीर्यलाई दान लिएर गर्भधारण गरेका थिए। यसै कारण पुरुष र बच्चा दुवैजना सुरक्षित छन्।
मोटोपनले झनै सेक्सी बनेकी यी अभिनेत्रीका यस्ता अवतारले दुनियाँ घायल
अहिले सामाजिक सञ्जालले नै कलाकारलाई स्टार बनाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जम्न नसकेकाहरुलाई गुमनामपनि बनाइरहेको छ ।यो एक यस्तो अड्डा हो जहाँ कुनै अभिनेत्रीको सुन्दर तस्बिर यदि एक पटक भाइरल भएमा सोच्नुहोस् उक्त अभिनेत्री रातारात स्टार अवश्य बन्ने छिन्। यस्तोमा आज हामी पञ्जाबी चलचित्र क्षेत्रका एक अभिनेत्रीको बारेमा चर्चा गर्न गईरहेका छौं जसको तस्बिरले इन्टरनेटमा सनसनी मच्चाएको छ ।
Prevकाठमाडौ छोडेर बझाङ गएकी सोनिका कागती बेच्दै, फेरीएको रुप समेत चिन्नै नसकिने (भिडियो हेर्नुस्)
Nextकसरी आयो होला ४ वर्षकी बालिका माथि यस्तो कु’क’र्म गर्ने सोँच ? कल्पना पनि गर्न नसकिने घटना देख्नुपर्दा मन नै सिरिंग हुन्छ (भिडियो हेर्नुस्)